Deepin OS 15.6 Tilmaamaha Rakibaadda | Laga soo bilaabo Linux
Deepin OS hubaal waa mid ka mid ah Linux qaybinta taas Waxay leedahay mid ka mid ah jawiyada desktop-ka ugu quruxda badan ee aan ka arki karno Linux. Dadkaas aan weli garanayn qaybintaan, waxaan dhihi karaa kuwa soo socda.
Deepin waa qeybinta Linux oo ay soo saartay shirkadda Shiinaha ee Wuhan Deepin Technology, tani waa qaybinta ilo furan oo ku saleysan Debian, in waxay isticmaashaa bay'ad desktop u gaar ah oo umuuqata mid hagaagsan.
Qaybintaan waxay noqon kartaa mid ka mid ah nidaamyada loogu taliyo ee GNU / Linux ee loogu talagay kuwa ka soo hayaamaya Windows-ka una tagaya dunida Linux inay isticmaalaan
Y gaar ahaan dadka aan haysan fikradda aasaasiga ah ee ku saabsan Linux. Taladan waxay ku saleysan tahay Deepin waxay leedahay mid ka mid ah hababka rakibaadda ugu fudud uguna macquulsan.
Markaa looma baahna wax ka badan inaad haysato fikradda aasaasiga ah ee ku saabsan waxa uu darawalkaaga adag yahay iyo qormooyinkiisa.
Xitaa sidaas oo ay tahay, waxaa jira kuwo cusub oo aan fahmin tan tanna waa mid la fahmi karo maxaa yeelay dhammaanteen waxaan maraynaa barta bilowga.
Taasi waa sababta aan la wadaagno dadka cusub tusahan fudud ee dejinta.
Kahor intaanan bilaabin hawsha rakibaadda, waxaa lagama maarmaan ah inaan ognahay shuruudaha aan u baahan nahay si aan u awoodno inaan ku rakibo Deepin kombiyuutarkayaga.
Shuruudaha nidaamka si loo rakibo Deepin OS:
Intel Pentium IV 2GHz processor ama ka sareeya.
1GB oo RAM ah ama ka badan oo ku habboon waxqabadka.
20GB oo ah meel disk bilaash ah ama ka badan.
Akhristaha DVD-ga haddii ay dhacdo in la rakibo sidan.
Dekedda USB ay dhacdo in la rakibo sidan.
1 Deepin OS 15.6 soo dejiso
1.1 Warbaahinta rakibaadda DVD
2 Ku rakibidda Deepin OS 15.6
Deepin OS 15.6 soo dejiso
Ogaanshaha shuruudaha iyo hubinta inaan haysano, waxaan u tagi karnaa inaan kala soo baxno ISO nidaamka oo aad ka soo dejisan karto bogga rasmiga ah ee qaybinta, xiriiriye waa kan.
Warbaahinta rakibaadda DVD
Windows: Waxaan ku gubi karnaa ISO-ga Imgburn, UltraISO, Nero ama barnaamij kasta oo kale xitaa iyaga oo aan ku jirin Windows 7 markii dambena waxay na siineysaa ikhtiyaar aan ku saxno midigta ISO.
Windows: Waxaad isticmaali kartaa Universal USB Installer, LinuxLive USB Creator, Etcher midkoodna waa fududahay in la isticmaalo.
LinuxIkhtiyaarka lagu taliyay waa inaad isticmaasho amarka dd:
In kasta oo aad sidoo kale kala soo bixi karto Etcher oo aad u fududeyn karto shaqada barnaamijkan.
Ku rakibidda Deepin OS 15.6
Marka la abuuro warbaahinteena rakibida, waa inaan hubinaa inaan heysano ikhtiyaar aan ugala soo baxno DVD ama USB BIOS-ka nidaamkayaga.
Anigu taaban maayo mowduucan noocyo badan awgood awgood, waxaad kala tashan kartaa shabakadda ama buuga gacanta hooyada / qalabka sidaad u suurtogelin lahayd ikhtiyaarkan, oo aad guud ahaan ka heli doontid "Boot" ama "boot settings" tab.
Markaad bilaabeysid kumbuyuutarka kaliya waa inaan dooranaa ikhtiyaarka koowaad oo ah "Ku rakib Deepin", kaas oo ay ku bilaabi doonto inay ku shubto wax kasta oo lagama maarmaan u ah inay ku bilowdo rakibidda kombiyuutarkayaga.
Tan ayaa la sameeyay ayaa hadda noo dhigi doonta xulashada luqadda rakibidda iyo nidaamka lagu qaabeyn doono. Markaad xulaneyso luqadda waxaan riixnaa xiga.
En liiska soo socda ayaa na weydiin doona xogta si loo abuuro isticmaaleyaasheena kaas oo aan kaga shaqeyn doonno nidaamka, waxaa muhiim ah inaad xasuusato eraygaaga sirta ah maadaama aysan muhiim ahayn oo keliya inaad soo gasho nidaamka, laakiin sidoo kale waxay noqon doontaa midka aad u baahan tahay inaad ka shaqeyso terminaalka.
Tallaabada xigta ayaa na weydiin doonta inaan dooranno aagagga waqtigeenna, annagaa dooranna kuweenna oo waxaan gujineynaa xiga.
Tallaabadan waa inaan doorannaa meesha rakibidda, midkoodna halkaan ku wada wado dhammaan wadista adag ama qayb gaar ah.
Xulashada ugu horeysa waa in la sameeyo rakibid fudud halkaasoo aan kaliya ka doorano qaybta ama diskiga aan dooneyno in nidaamka lagu rakibo.
Si waxaan rabnaa rakibo horumarsan ama qaybtayada aan rabno inaan ku rakibno ma muuqato, halkan ayaan ku qaabeyn karnaa.
Halkan waxaa naloo tusi doonaa dhammaan qormooyinka la heli karo halkan waxaan ka dooran karnaa meesha lagu rakibayo oo aan ku hagaajin karno.
Waxaan gujineynaa sii wadida oo hadda waa inaan sugnaa in rakibidda la dhammeeyo si loo bilaabo ku raaxeysiga qaybintaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Hagaha Deepin OS 15.6
Waa maktabaddee deegaankaagu ku saleysan yahay?
Jawaab Felix Manuel
Gudaha DTK (Qalabka Deepin Tool), asal ahaan C ++ iyo Qt
Jawaab David Naranjo
Waxay ila tahay maqaal liita. Waxaan rajeynayey inaan arko shaashadda qeybinta halkii aan ka arki lahaa "waxay leedahay mid ka mid ah jawiyada desktop-ka ugu qurxoon ee aan ku arki karno Linux" Si kastaba ha noqotee, kaliya dhowr shaashadood oo rakibaadda ah. Waxaan sidoo kale kaa filayey inaad ka faallooto software-ka ay ku leedahay saldhig iyo waxyaabaha xiisaha leh ee Deepin kaliya keento.
Jawaab Juan J. Garrido
OpenShot 2.4.2 waxay la timid muuqaalo cusub iyo saameyn cusub